Bangladesh secure share of series with Harare victory
Monday 29th April 13:47 Ziaur Rahman claimed four wickets as Bangladesh earned a series-levelling, 143-run win over Zimbabwe on the final day of the second Test.	Ervine in Zimbabwe squad
Wednesday 12th January 13:35 Sean Ervine has, as expected, been included in Zimbabwe's 15-man squad for the World Cup after quitting Hampshire.
Proteas power to T20 win
Friday 8th October 19:59 South Africa chased down a target of 169 for a seven-wicket win over Zimbabwe in the first T20I.	Masakadza demolishes Kenya
Sunday 18th October 16:10 Hamilton Masakadza hit 178 not out as Zimbabwe completed a 4-1 series success with a 142-run victory over Kenya in the fifth ODI.	Masakadza leads Kenya rout
Monday 12th October 17:31 Opening batsman Hamilton Masakadza hammered a career-best 156 as Zimbabwe slammed their African neighbours Kenya by 91 runs.	Masakadza tames Tigers
Friday 14th August 16:02 Hamilton Masakadza's maiden ODI century helped Zimbabwe claim a 69-run victory over Bangladesh in Bulawayo.	Zimbabwe complete whitewash
Wednesday 4th February 15:25 Zimbabwe wrapped-up a whitewash series victory over Kenya with a seven-wicket win in the fifth and final ODI in Nairobi.	Zimbabwe crush Kenya again Sunday 1st February 17:01 Zimbabwe claimed a 66-run win over Kenya in Nairobi on Sunday to open a 4-0 lead in the one-day series.	Kenya mauled in Mombasa
Tuesday 27th January 16:14 An inspired all-round display from Elton Chigumbura helped Zimbabwe win the opening ODI against Kenya by 109 runs.	Zimbabwe claim third place
Monday 13th October 18:03 Zimbabwe thrashed hosts Canada by 109 runs in the third place play-off at the quadrangular Twenty20 tournament in Toronto.	Windies clinch series
Friday 7th December 16:26 West Indies chased a target of 233 to win the fourth one-day international by five wickets in Zimbabwe and take an unassailable 3-1 lead in series.	Video